Myanmar Monk Student Association: ကျောက်ကွင်းဝါဒပြိုင်ပွဲ (၁၇)
အလိုတော်ရဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် သံဃာတော်အရှင်မြတ်များ, ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
ဒကာ/ဒကာမ များနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဒကာ/ဒကာမအပေါင်းတို့ ……..
ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာ မိမိအားကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မိမိညွန်ပြ
ဟောပြောသော တရားဒေသနာကို လိုက်နာကျင့်သုံးသည်ဖြစ်စေ, မကျင့်သုံးသည် ဖြစ်စေ, လူမျိုးမရွေး ဆူကြုံနိမ့်မြင့်မရွေး အားလုံးသော သတ္တ၀ါများအပေါ် မဟာကရုဏာတော်ကို ထားတော်မူပါတယ်။ အားလုံးကိုသားတော်အရင်း ရာဟုလာနဲ့မခြား တတန်းတစားတည်း ထားပြီး တပြေးညီ သဘောထားပြီး ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရာ, လွတ်မြောက်ကြောင်း တရားဒေသနာများကို ဟောဖေါ်ညွန်၍ သြ၀ါဒပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်တော်တိုင်လည်း မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့ အကျင့်စာရိတ္တရှိပြီးတော့ သတ္တ၀ါများကိုလည်း မြင့်မြတ်ကြီးမားသော မေတ္တာတရားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တော်တိုင် သည်းခံတော်မူတယ်၊ “ခန္တီ ပရမံ တပေါ တိတိက္ခာ”အစရှိသည်အားဖြင့် “သည်းခံခြင်းဟာ အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ အကျင့်” ဖြစ်ကြောင်း ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးမှာ မေတ္တာကို အဦးထားပြီး ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သား ဖြစ်ကြတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သည်းခံတတ် ရမယ်၊ မေတ္တာထားတတ်ရမယ်၊ စိတ်သဘောထား နူးညံ့သိမ်မွေ့ရတယ်။
ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးနှင့် ခွင့်လွတ်တတ်ရတယ်။ ခုနင်က ဆရာတော်ကြီး ဦးရွှေမှန်ပြောသလိုပေါ့လေ။ ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောပွဲဆိုတော့ မိမိရဲ့ဘာသာအယူဝါဒ ကောင်းမွန်မှန်ကြောင်း အမွန်းတင်ပြီးတော့ သူတစ်ပါးဘာသာရဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေကို ဝေဖန်ကြမှာမို့ နှစ်ဘက်စလုံးက ဟောပြောတာကို သေသေချာချာ နားထောင်ပြီးတော့ 
ယူသင့် ယူထိုက်တာ၊ ပယ်သင့် ပယ်ထိုက်တာတွေကို မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ
မိမိနှစ်သက်ရာကို ယူကြပါရန် အလေအနက် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ် ဒကာ/ဒကာမအပေါင်းတို့ ……စသည်ဖြင့်မြွက်ကြားလေသည်။
ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာကြီး ဦးသာဒင်(မန္တလေး)က စတင်ဟောပြောသည်။ ဦးသာဒင်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဘုန်းကြီးလူထွက်ဖြစ်၍ ပထမကြီးတန်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ပါဠိစာပေကျွမ်းကျင်သည်ဟု နာမည်ကြီးသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပြီး တရားဟောအလွန်ကောင်းသည်ဟု နာမည်ကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။
သူက ဓမ္မကထိက ဆရာတော် ဦးဉေယျ ရေးသားခဲ့တဲ့ (လောကမျက်မှန်) အမည်ရှိစာအုပ်ကို စတင်
တိုက်ခိုက်ပြောဟောသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို နှိမ်နင်းရေးသားထားသော ထိုစာအုပ်ပါ အချက်
အလက်များကို ချေပ၍ ရှင်းလင်းသည်။ မူလက ဦးဉေယျကိုယ်တိုင် ကြွရောက်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်မှ
ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု သတင်းကြီးနေရာ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာအုပ်စုသည် ဦးဉေယျ ရေးသည့် လောကမျက်မှန်ကို
တိုက်ခိုက်ချေပရန် အကြောင်းအချက်များ ရှာဖွေစုဆောင်း စီစဉ်လာခဲ့ကြသည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်
ခဲ့ကြသောကြောင့် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လည်း ဟောပြောနိုင်ရာ ခရစ်ယာန် ချင်းပရိသတ်မှာ တပြုံးပြုံးနှင့်
“ဆရာတော…် . ဦးသာဒင်ဟောပုံဟာ လေးတယ်၊ ခရစ်ယာန်တရားဟောသံတွေလုပ်နေတာနဲ့
အချိန်ဖြုန်းသလို ဖြစ်နေတယ်၊ အချက်အလက်စုစည်းပြီး ပြန်ချေပတာ ကွာဟပြီး ဝေးနေတယ်ဘုရား” ဟူ၍
ဆရာတော်၏အနီးတွင် ရှိနေသော ဦးကိုကိုကြီးက ဆရာတော်အား တိုးတိုးလျှောက်ထားရာ ဆရာတော်က
ဦးသာဒင်ဟောသမျှကို ရေးမှတ်နေရာမှ ပြုံးပြီးခေါင်းညိတ် လိုက်လေသည်။။
လောကမျက်မှန်စာအုပ်တွင် ပါသောအချက်အလက်များကို ချေပပြီးနောက် ဦးသာဒင်သည်
“ဗုဒ္ဓ၀င်”ကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်လေသည်။ ဗုဒ္ဓ၀င်ဟာ ဂေါတမရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို ဖေါ်ပြတဲ့ကျမ်းပဲ၊ အဲဒီအခန်းမှာ
ပါတာတွေဟာ ဘယ်လောက်ယုတ်တိကင်းမဲ့သလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ၊ ကျွန်တော်တင်ပြပါ့မယ်။
စထွက်ကတည်းက တုသိတာနတ်ပြည်မှာနေတဲ့ ဘုရားအလောင်း သေတကေတုနတ်သားကို တစ်ခြားနတ်
ဗြဟ္မာတွေက လူ့ပြည်ဆင်းပြီး ဘုရားဖြစ်ဖို့ ပဋိသန္ဓေယူဖို့ တောင်းပန်မှ မယ်တော်မာယာရဲ့ ဗိုက်ထဲ
၀င်သတဲ့ဗျာ၊ ဘုရားဖြစ်ရမယ့်သူက ဘာမှမသိရဘဲ ဘုရားမဖြစ်မယ့်သူတွေက ပြောမှသိရသတဲ့လား? ပြီးတော့ပဋိသန္ဓေယူတဲ့နေ့က ၀ါဆိုလပြည့်နေ့၊ အဲဒီနေ့ထူး နေ့မြတ်ကြီးမှာတောင် မေထုနသံဝါသကိစ္စဆိုတဲ့.. အဲ..ဟိုကိစ္စကို ရှောင်ကြဥြ်ကဟန်မတူပါဘူး၊ စောင့်ထိန်းကြဟန်မရှိပါဘူး။ အဲဒါကိုကြည့်ရင်သုဒ္ဓေါဒနကပဲ
လွန်သလား? မယ်တော်မာယာကပဲလွနသ် လား? ဒါမှမဟုတ်နှစဉ်ီးလုံးအတူတူပဲလားတော့မဆိုနိုင်ပါဘူး။၀ါဆိုလပြည့်နေမှာ ပဋိသန္ဓေယူတယ်ဆိုတာကတော့ ထင်ရှားနေပါတယ်။ အဲဒါကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ အကျင့်အရ ဂေါတမဟာလည်း ပဋိသန္ဓေကစပြီး လူလွန်ဖြစ်ပါတယ်”
“ခရစ်ယာန် ပရိသတ်များအားတက်သလောက် ဗုဒ္ဓဘာသာပရိသတ်များ မျက်နှာ မကောင်းလှ၊
ရဟန်းများမှာ မျက်နှာပျက်နေကြသည်။ ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဋ္ဌကား ပြုံး၍ ဦးသာဒင် ကိုကြည့်နေလေသည်။ဦးသာဒင်က ဆက်ဟောပြန်သည်။“ဘုရားအလောင်းရဲ့ ဖွားတော်ဖက် ခုနှစ်ဦးတဲ့ဗျာ.. အာ၊ ဗော၊ ကာ၊ ယ ၊ ကဏ်၊ ရွှေ၊ ဆန် တဲ့။
ဖွားဘက်တော် တွေထဲမှာ ကဏ္ဍိက ဆိုတဲ့မြင်း, အဲ…. တိရစ္ဆာန်လည်းပါတယ်၊ ဗောဓိပင်ဆိုတဲ့ သစ်ပင်လည်းပါတယ်၊ သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ ရွှေအိုးကြီးလေးလုံးဆိုတာလည်း ပါလိုက်သေးတယ်၊ ဘယ်လောက်
ယုတ္တိကင်းမဲ့သလဲဗျာ… အာနန္ဒာဟာ ဖွားဖက်တော်တဲ့, ဖွားဖက်တော်ဆိုတာ တစ်နေ့ တည်း တစ်ချိန်တည်း
မွေးဖွားတာကို ခေါ်တာဗျ၊ နောက်ပိုင်းကြတော့ ညီတော်အာနန္ဒာ တဲ့ဗျ။
ဖွားဖက်တော်လည်း ဆိုသေး, ညီတော်အာနန္ဒာလည်းဆိုသေး ဘယ်လောက်များကမောက်ကမ နိုင်သလဲ
ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ”။“ရေအွှိုးကြီးလေးလုံးဟာ ကပိလ၀တ်ပြည့်က, နန်းတောဝ် င်းအတွင်းမှပဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့စာကဆိုထားတယ်။ အဒဲါလည်း စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး …
သဃ-င်္ မည်တဲ့ရေအွှိုးကြီးက တစ်ဂါဝုတ်ပမာဏရှိသတဲ့ဗျ၊ ဧဠ-မည်တဲ့ ရွှေအိုးကြီးက ယူဇနာဝက်လောက်ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဥပ္ပလ-မည်တဲ့ ရွှေအိုးကြီးက
သုံးဝုတ်ပမာဏ ရှိသတဲ့၊ ပုဏ္ဏရိက-အမည်ရှိတဲ့ ရွှေအိုးကြီးက တစ်ယူဇနာရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ စုစုပေါင်း
နှစ်ယူဇနာခွဲ ရှိတယ်။ ခုခေတ်သုံး မိုင်နှင့်ဆိုလျှင်တစ်ယူဇနာဟာ ဆယ့်သုံးမိုင်ခွဲလောက်ရှိတယ်။
ဒီရေအွှိုးကြီးလေးလုံး အတိုင်းအတာပမဏဟာ မိုင်သုံးဆယ်ကျော်ရှိနေပြီ, ဤရေအွှိုးကြီးတွေပေါ်တယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတရ်ိုး မှန်ခဲ့ရင်ရှေးခေတ်က လဦူးရေ ငါးသိန်းလောက်ရှိတဲ့ ကပိလ၀တ်ပြည်ကလေးမှာ လူတွေတိုက်တာအမ်ိတွေဟာ ဒီရေအွှိုးကြီး လေးလုံးပေါ်တာနှင့်ပဲပျက်စီးသွားစရာရှိပါတယ်၊ အဲဒီလောက်အပြောကြီးကြီးနဲ့ ပလွှား ၀ံ့ကြွားထားတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်ပါတဲ့ ဂေါတမဘုရားထင်ရာလျှောက်ပြီး ဟောထားတဲ့တရားတွေကို စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ လူတွေက ယုံလို့ဖြစ်ပါ့မလား?၊ ဦးသာဒင်က ပရိသတ်ကို မေးခွန်းထုတ်ရင်းအကဲခတ် ကြည့်လိုက်၏၊ ထို့နောက်ဆက်လက်၍ ပြောပြန်သည်။